Agaasimihii idaacadda Shabeele oo caawa dablay hubaysani Moqdisho ay ku dileen. – Radio Daljir
Agaasimihii idaacadda Shabeele oo caawa dablay hubaysani Moqdisho ay ku dileen.
Moqdisho, Janu, 28 ? Waxaa caawa fiidkii magaalada Moqdisho lagu dilay agaasimihii idaacadda Shabeelle Xassan Cismaan Cabdi ?Fantastic\_’.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in dilka marxuun agaasime Xassan ?Fantastic? uu ka dhacay degmada Wadajir xilli uu u socday guri uu degmadaasi ka dagan-yahay.
Dilka marxuun ?Fantastic? ayaa waxaa ka dambeeyay 2 nin oo ku hubaysan bistoolado, waxaa arrintaan ay daba-socotaa dil bishii decembar dabayaaqadii 2011 loogu geestay agaasimihii TV-ga Horn Caple mudane C/salaan Ibraahim Xiis.